Uma uthanda ukudubula izikhali ezahlukene, kufanele nakanjani sinake umdlalo "GTA: San Andreas" ngoba kukhona ungathola isibhamu ezithakazelisa kakhulu, futhi ngeke kube namuntu ziyamnqinda ongakuthwebula futhi othile. Nokho, kukhona futhi izici zayo siqu - ngokwesibonelo, ngeke ukwazi isikhathi eside ukuthola ukufinyelela ezithile izikhali, njengoba kuto ezindaweni ezikhethekile lapho akulula kangako ukuthola. Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga lezi izibhamu, kodwa izobiza isamba Amazing. Ngokwesibonelo, ukuthatha minigun - esinye sezikhali ethandwa kakhulu kule game, lokukhulunywa ngako kulendzaba eqolo. Kodwa kunzima kakhulu kule game, ngisho uma sibhekane ngokuphumelelayo lo msebenzi, ke uzothola nzima nakakhulu. Nokho, izinto zokuqala kuqala - lesi sihloko senzelwe ukukuvumela ukuthola lapho ukuthola minigun e "GTA: San Andreas."
izindawo Main minigun
Uma unesithakazelo lapho ukuthola minigun e "GTA: San Andreas", khona-ke kufanele silungiselele usesho sasivumela eside, okuyinto ke zidinga ukuthi ke isinyathelo esiwujuqu. Indlela elula - ukuya Las Venturas. Kukhona igalaji komhlaba, lapho asikho esinye isenzo ungathola minigun yakho yokuqala. Nokho, lokhu akukhona ukuphela kwendawo, ngaphandle ukuthi kwezinye izindawo ziyafinyeleleka ingasaphathwa. Okokuqala, ungaya esakhiweni - kukhona ngesikhathi kakhulu phezulu uzothola inganono edingekayo, kanti okwesibili, ungaya Sam Fierro futhi kukhona ukuthola ibhuloho phezu ujantshi - ke nayo izoba minigun. Nokho, kuleli kanye kwelinye icala, uyoba ukusebenzisa dzhetpakom noma fly kuze kube seqophelweni oyifunayo ebhanoyini noma indiza. Kodwa minigun zokugcina Sokubambisana ingatholakala engosini ethi a enkanjini ehlane, kuphela ukuze uthole kuyoba nzima kakhulu, ngoba uzobe kakhulu ukuba simelane isitha. Manje uyazi lapho ukuthola minigun e "GTA: San Andreas," kodwa yinye indawo ekhethekile odinga ukukwazi.
Ezigabeni kamuva yomdlalo uba pulazi etholakalayo Toreno, lapho uzokwazi ukuza emuva nganoma isiphi isikhathi. Futhi uma uyazibuza lapho ukuthola minigun e "GTA: San Andreas", khona-ke nakanjani kufanele ucabange le ndlela, ngoba lapha, njengoba e-Las Venturas, isibhamu zingafundwa ngaphandle kobunzima. Nokho, kukhona engavamile, okuyinto nakanjani amehlo akho. Iqiniso lokuthi eduze pulazi, ungathola ugcine iphuzu. Kuyinto imfihlo ukuthi uma ulanda umdlalo, zonke izikhali kumephu kubuyiselwa. Ngakho, ungathatha minigun kuleli pulazi, londoloza, ukulayisha umdlalo - futhi aphinde athathe minigun. Ngakho ungakwazi phezulu it up Ammo kuya esiphezulu futhi njalo bakwazi kabusha izimpahla ezingekho emthethweni, lapho ziqala siphele.
Ingabe ikhona ukukopela ukuze minigun?
abadlali abaningi uyazibuza ukuthi kukhona ukukopela ekhethekile "GTA:. San Andreas" Minigun - lena esinamandla kakhulu, ngakho ngo-inguqulo yasekuqaleni umdlalo ikhodi ekhethekile, okwakuyoholela ukukunika lokhu isibhamu alikho. Ngakho awukwazi ngisho ukuzama zithinta aphambe, ngoba akekho kubo ngeke kusize. Nokho, lokhu akusho ukuthi ukuthola minigun ukukopela indlela engenakwenzeka.
Ikhodi "GTA" minigun ngempela lapho, kuphela ke ngeke isebenze uze ungenalo ozifakile kwalokho esikhethekile cheaters, okuzokwenza kakhulu lula ukuphila bonke abadlali. Ngakho, uma ufaka le isengezo, uzodinga chofoza ibha yesikhala ukhiye "a" ukuba ezandleni zakho ngokushesha uvele minigun. Njengoba ungacabanga, lokhu akulona kungenzeka kuphela - ezinye inhlanganisela kuzokuvumela ukuthola izikhali nakakhulu.
Inkampani ye Heroes 2: aphambe, Mods futhi umdlalo ukubuyekeza
Clay Lincoln: uhlamvu
Njengoba e "Avatar" ukwenza into izinhlamvu?
Amakhodi "Mortal Kombat 3 Ultimatum" ( "Sega") amasu, inhlanganisela, izimfihlo
Dzheyson Brodi - protagonist yomdlalo Far Cry 3
Incazelo ye-phraseology "ukufaka amanzi emanzini", imvelaphi kanye nezibonelo
Dream Ukuhunyushwa: dream ukundiza phezu komhlabathi. Kungani iphupho flying?
Irina Shayk: Biography. Model Irina Shayk: ubude nesisindo
Uma upapa ithole chiry
Medical Center "Eviva", laseKharkov: Izibuyekezo
Izimpawu pneumonia in izinsana. Ukwelashwa yemiphumela yokugula
I-Virtual Card "Yandex.Money": indlela yokudala?